Fianakavian’ny maty : «Tsy rariny ny didim-pitsarana» | NewsMada
Fianakavian’ny maty : «Tsy rariny ny didim-pitsarana»
Tsy afaka ny hangina. «Tena tsy rariny ny didy nivoaka ny 18 septambra, taorian’ny fitsarana natao tao amin’ny efitra faharoa, ny 4 septambra teo, tetsy Anosy», hoy Ramanantsoa Rivo. Misazy 12 volana an-tranomaizina sy mandoa onitra 6 tapitrisa Ar ilay tovolahy mpamily ary notsoahina taminy mandritra ny 12 volana koa ny fahazoan-dalana mamily fiara. Nambaran’ny niharam-boina fa kely izany sazy sy onitra nambaran’ny fitsarana izany. Tsy arakaraka ny ratran’ny zanany sy ny fahafatesan’ny vadiny ary ny fahasimban’ny fananany. Ny fanadihadiana amin’ny fahasimban’ny fiara 7 tapitrisa Ar, nefa ny didy nivoaka, onitra 3 tapitrisa Ar. Antony nitakiany onitra 100 tapitrisa Ar izany. Ny mpitory hafa nanana ny naratra tamin’iny anefa, nahazo hatrany amin’ ny 29 tapitrisa Ar.
Etsy andaniny, nambarany fa tsy mba nandray anjara tamin’ny fikarakarana ny razana ny nahavanon-doza ary tsy hita raha tsy niantsoana zandry nisambotra azy, telo herinandro aty aorian’ny loza. “Tsy mba nanatona na nifampiraharaha akory…”, hoy ihany izy.
Manoloana izany, nampiakatra ny raharaha eny amin’ny fitsarana ambony ity hanano-tena tsy fidiny ity ary efa tafapetraka, omaly etsy Anosy izany.
Avy nanala azy vita “bacc”
Tsiahivina fa nisehoan’ny lozam-pifamoivoizana ny faran’ny volana jolay teo, teny Maibahoaka izany. Notrongisin’ilay Peugeot 308 nentin’ilay tovolahy, avy nanala azy vita “bacc”, ilay fiara Opel Combo ka nizara roa. Vokany, maty tany amin’ny hopitaly ny vadin-dRamanantsoa Rivo, ary naratra ny zanany. Samy nitory ilay mpamily nahavanon-doza ny namany iray, niaraka tao anatin’ilay fiara Peugeot nandona, sy ny nanana ny havana namoy ny ainy. «Tsy afa-po izahay fa toa ireo olona namono olona indray no nahazo vahana, indrindra fa eo amin’ny resaka onitra, noho izahay nanana ny maty sy ny simba fananana», hoy ihany ity mananon-tena tsy fidiny ity.